Luka 24 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
24 Noko ke, ngosuku lokuqala lweveki, ekuseni kakhulu baya engcwabeni, bephethe iziqholo ababezilungisile.+ 2 Kodwa bafumana ilitye liqengqwe lesuka kwingcwaba lenkumbulo,+ 3 yaye xa bangenayo abazange bawufumane umzimba weNkosi uYesu.+ 4 Ngoxa babedidekile koku, khangela! amadoda amabini awayenezinxibo ezibengezelayo ema ngakubo.+ 5 Njengoko aba bafazi bothukayo yaye beqondele emhlabeni, la madoda athi kubo: “Kutheni nifuna Lowo uphilayo phakathi kwabafileyo nje? 6 [[Akakho apha, uvusiwe.]]+ Khumbulani indlela awathetha ngayo kuni ngoxa wayeseseGalili,+ 7 esithi uNyana womntu umele anikelwe kwizandla zabantu abanesono, abethelelwe aze avuke ngomhla wesithathu.”+ 8 Ngoko bawakhumbula+ amazwi akhe, 9 yaye babuya kwingcwaba lenkumbulo baza bazixela zonke ezi zinto kwabalishumi elinanye nakubo bonke abanye.+ 10 YayinguMariya Magadala, noYowana,+ noMariya unina kaYakobi. Kanjalo, nabanye abafazi+ ababekunye nabo babebaxelela abapostile ezi zinto. 11 Noko ke, la mazwi abonakala njengemfitshimfitshi kubo yaye babengabakholelwa+ aba bafazi. 12 [[Kodwa uPetros wesuka wabalekela engcwabeni lenkumbulo, yaye wagoba, wazibona izibopho zizodwa. Ngoko wemka, emangalisiwe koko kwakwenzekile.]] 13 Kodwa, khangela! kanye ngaloo mini ababini kubo babehamba besiya kwidolophana ekumgama omalunga neekhilomitha ezilishumi elinanye ukusuka eYerusalem, egama liyiEmawusi, 14 kwaye babencokola ngazo zonke ezi zinto+ zazenzekile. 15 Njengoko babencokola yaye bexubusha, uYesu wasondela+ waza wahamba nabo; 16 kodwa amehlo abo ayebanjiwe ukuba bangamqondi.+ 17 Wathi kubo: “Zizinto zini na ezi nihamba nixambulisana ngazo?” Kwaye bema ngxi belusizi ebusweni. 18 Ekuphenduleni omnye ogama linguKleyopa wathi kuye: “Nguwe wedwa na umphambukeli eYerusalem ukuba ungazazi izinto ezenzekileyo kuyo ngezi mini?” 19 Waza wathi kubo: “Ziphi na izinto?” Bathi kuye: “Izinto eziphathelele uYesu umNazarete,+ owaba ngumprofeti+ onamandla ngomsebenzi nelizwi phambi koThixo nabo bonke abantu; 20 nendlela ababingeleli abaziintloko nabalawuli bethu abamnikela ngayo kwisigwebo sokufa baza bambethelela.+ 21 Kodwa besithembe ukuba lo mntu nguye owayemiselwe ukuhlangula uSirayeli;+ ngapha koko, olu lusuku lwesithathu ukususela ekwenzekeni kwezi zinto. 22 Ngaphezu koko, abafazi abathile+ phakathi kwethu basikhwankqisile, ngenxa yokuba bebeye kwasekuseni kwingcwaba lenkumbulo 23 kodwa abawufumananga umzimba wakhe yaye bafike besithi babone nombono ongaphaya kowemvelo weengelosi, ezithe uyaphila. 24 Ngokubhekele phaya, bambi kwabo bakunye nathi baya engcwabeni lenkumbulo;+ bafika kunjengoko babetshilo abafazi, kodwa abambonanga yena.” 25 Ngoko wathi kubo: “Owu nina bangenangqiqo nabantliziyo ingakhawuleziyo ukukholelwa zonke izinto abazithethayo abaprofeti!+ 26 Kwakungeyomfuneko na ngoKRISTU ukubandezeleka+ zezi zinto nokungena kuzuko lwakhe?”+ 27 Yaye eqalela kuMoses+ nakubaProfeti+ bonke wabatolikela izinto eziphathelele yena kuzo zonke iZibhalo. 28 Ekugqibeleni basondela kwidolophana leyo babehambele kuyo, yaye wenza ngokungathi uyagqitha. 29 Kodwa bamcenga, besithi: “Hlala nathi, ngenxa yokuba kuyahlwa nemini sele ithambekile.” Ngako oko wangena wahlala nabo. 30 Yaye njengoko wayengqendeve nabo esidlweni wathabatha isonka, wasisikelela, wasiqhekeza waza wabanika sona.+ 31 Ngako oko amehlo abo avuleka ngokupheleleyo baza bamqonda; yaye wathi shwaka kubo.+ 32 Kwaye bathi omnye komnye: “Bezingavuthi na iintliziyo zethu njengoko ebethetha nathi endleleni, njengoko ebesivulela ngokupheleleyo iZibhalo?” 33 Ngalo kanye elo lixa babuyela eYerusalem, babafumana abalishumi elinanye nabo babekunye nabo bedibene ndawonye, 34 besithi: “Enyanisweni iNkosi ivusiwe yaye ibonakele kuSimon!”+ 35 Bakubalisa ke okwenzeke endleleni nendlela abamazi ngayo ngokuqhekeza isonka.+ 36 Ngoxa babesathetha ngezi zinto wema phakathi kwabo [[waza wathi kubo: “Ngamana ningaba noxolo.”]] 37 Kodwa ngenxa yokuba babenkwantya, yaye bothukile,+ babecinga ukuba babone umoya. 38 Ngoko wathi kubo: “Kutheni nikhathazekile nje, kwaye kutheni nithandabuza ezintliziyweni zenu? 39 Bonani izandla zam neenyawo zam, ukuba ndim ngokwam; ndiveni+ yaye ndiboneni, ngenxa yokuba umoya awunanyama namathambo+ kanye njengoko nibona ukuba mna ndinazo.” 40 [[Kwaye njengoko wayesitsho oku wababonisa izandla zakhe neenyawo zakhe.]] 41 Kodwa ngoxa babengekakholelwa+ ngenxa yovuyo olupheleleyo yaye bemangalisiwe, wathi kubo: “Ninanto idliwayo na apha?”+ 42 Bamnika intwana yentlanzi eyosiweyo;+ 43 wayithabatha waza wayidla+ phambi kwamehlo abo. 44 Ke kaloku wathi kubo: “Ngawo la amazwi am endawathetha kuni ngoxa ndandisekunye nani,+ ukuba zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses nakubaProfeti+ nakwiiNdumiso+ zimelwe kukuzaliseka.” 45 Wandula ke wazivula ngokupheleleyo iingqondo zabo ukuba zicacelwe yintsingiselo yeZibhalo,+ 46 yaye wathi kubo: “Kubhaliwe ukuba uKRISTU wayeya kubandezeleka aze avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu,+ 47 yaye egameni lakhe kwakuya kushunyayelwa inguquko yoxolelo lwezono+ kuzo zonke iintlanga+—kuqalela eYerusalem,+ 48 nimele nibe ngamangqina+ ezi zinto. 49 Kwaye, khangelani! ndinithumelela oko kuthenjiswe nguBawo. Nina, ngoko, hlalani esixekweni nide nambathiswe ngamandla avela phezulu.”+ 50 Kodwa wabakhokelela ngaphandle ukuya kufikelela eBhethani, yaye waziphakamisa izandla zakhe waza wabasikelela.+ 51 Njengoko wayebasikelela wahlukaniswa nabo waza wathwalelwa phezulu ezulwini.+ 52 Yaye baqubuda kuye baza babuyela eYerusalem benovuyo olukhulu.+ 53 Kwaye baqhubeka besetempileni bebonga uThixo.+